Iiarhente zentengiso Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa ngaphakathi California
Real Estate Listings: Real Estate Agent Directory Real Estate Agents California
Iiarhente zentengiso ngaphakathi California
Iiarhente zentengiso ngaphakathi San Diego
1 - 4 ka 4 Uluhlu
Ufuna uncedo ekuthengiseni / ekuthengeni ikhaya lakho? Sukukhathazeka
Ngaba ufuna uncedo ekuthengiseni ikhaya lakho? Sukukhathazeka - silapha ukukunceda uthengise ikhaya lakho ngendlela efanelekileyo nangeedola eziphezulu. Tsalela umnxeba uVicarkarian kule nombolo 818-248-8668. Vumela iVic ikuncede uthenge okanye uthengise ikhaya lakho! Ishedyuli yokuqeshwa kwakho uku...
Ipapashwe ngu Vic Markarian
umbono Iiarhente zentengiso ipapashiwe 3 months ago
I-BA kuLawulo lweShishini / lweNtengiso-Ulwazi kunye nezakhono zokuncedisa ukuthengisa okanye ukuthengisa ikhaya, i-condo okanye idolophu. Ukudibana komthetho-Ulwazi olukhethekileyo kunye nokuqonda izinto zomthetho zekhontrakthi kunye nentengiselwano. Ama-40+ Amava eminyaka -Izixhobo zokufunda ezive...
Ipapashwe ngu Bill Bird
umbono Iiarhente zentengiso ipapashiwe 2 years ago
Are You Looking for a Realtor to Buy a House or Sell Your Home?
If you are looking for an agent who is passionate about buying and selling real estate and can deliver results, then you have come to the right place! I can provide you with every available resource to make this process as stress free as possible. As a resident of the area, I can give you an insider...
Ipapashwe ngu Deniz Halilov
umbono Iiarhente zentengiso ipapashiwe 3 years ago
Our professional services will help you find the house of your dreams. We have a team of highly-dedicated experts who will guide you step-by-step in the home buying process. With our reliable real estate services, you will have access to countless houses in the area that might be right for you. This...
San Diego in California (United States), 92108
Ipapashwe ngu Amerisold Realty
I-California lilizwe elikummandla wePacific eMelika. Ngabemi abazizigidi ezingama-39,5 abahlala kuyo yonke indawo malunga neekhilomitha ezili-163,696 zeekhilomitha (423,970 km2), iCarlifonia lelona lizwe linabantu abaninzi baseMelika kwaye ngowesithathu ngobukhulu endaweni. Idolophu enkulu yelizwe yiSacramento. Indawo eNkulu yeLos Angeles neMimandla yeSan Francisco Bay yindawo yesibini kwisithili kunye nesihlanu esona sineendawo ezininzi, kunye nabemi abazizigidi ezili-18,7 kunye ne-9.7 yezigidi ngokwahlukeneyo. ILos Angeles sesona sixeko sikhulu saseCalifornia, kwaye sesesibini kwelona lizwe linabantu abaninzi, emva kweNew York City. I-California ikwanelona llizwe linelona lizwe linabemi abaninzi, iLas Angeles County, kunye neyona dolophu inkulu kuyo, iSan Bernardino County. IsiXeko kunye neDolophu yaseSan Francisco sesesibini isixeko esinezona ndawo zinabantu abaninzi emva kweSixeko saseNew York kunye neyona yesihlanu inabemi abaninzi, emva kwezine kuphela kwezintlanu zeNew York City. Uqoqosho lwaseCalifornia, olunemveliso yelizwe epheleleyo ye- $ 3.0 yezigidi zezigidi, lolona luqoqosho olukhulu lwelizwe jikelele. Ukuba belililizwe, iCarlifonia ibiya kuba yeyona ntlanu yezoqoqosho ikhulu emhlabeni (inkulu kune-United Kingdom, France, okanye India), kwaye uninzi lwayo lube ngabaninzi ngomhla wama-2020. Indawo enkulu yeLos Angeles neSan Francisco Bay Indawo yindawo yesibini kunye neyesithathu ngobukhulu kwezoqoqosho edolophini (iidola ezisisi-1,3 seetriliyoni kunye neetriliyoni ezili-1,3 zeedola ngokulandelelana kowama-2018), emva kwendawo yeNew York. Indawo yaseSan Francisco Bay PSA yayineyona mveliso iphezulu yelizwe iphezulu kwi-capita nganye ngo-2018 ($ 106,757) phakathi kweendawo ezinkulu zezibalo, kwaye likhaya leenkampani ezintathu kwezona zilikhulu ngobukhulu beentengiso kunye nabathathu kwabona bazizityebi emhlabeni.California Inkcubeko ithathwa njengesiqhelo kwilizwe liphela kwinkcubeko edumileyo, unxibelelwano, ulwazi, ubuchule, indalo, ezoqoqosho, ezopolitiko nezolonwabo. Ngenxa yokuhluka kukarhulumente kunye nokufuduka, iCarlifonia idibanisa ukutya, iilwimi, kunye nezithethe ezivela kwezinye iindawo kwilizwe liphela nakwihlabathi liphela. Ithathwa njengemvelaphi yomzi-mveliso weefilimu waseMelika, i-hippie counterculture, ukutya okukhawulezayo, inkcubeko kunye neenkcubeko zemoto, i-Intanethi, kunye nekhompyuter yabucala. Indawo yaseSan Francisco Bay kunye neMimandla eNkulu yeLos Angeles ibonwa ngokubanzi njengamaziko obugcisa behlabathi kunye namashishini okuzonwabisa, ngokwahlukeneyo. Uqoqosho lwaseCalifornia lwahluke kakhulu: Iipesenti ezingama-58 zayo isekwe kwezemali, urhulumente, iinkonzo zearhente yokuthengisa izindlu, itekhnoloji, kunye nochwephesha kwezesayensi, kunye nobuchwephesha beenkonzo. Nangona ibangela i-1.5% kuphela kuqoqosho lweli lizwe, ishishini lezolimo laseCalifornia linemveliso ephezulu kakhulu yalo naliphi na ilizwe lase-US. ICalifornia yabelana ngomda ne-Oregon ukuya emantla, Nevada naseArizona empuma, kunye neMexico yaseBaja California ukuya empuma. mazantsi. Ijografi eyahlukileyo yeli lizwe isusela kuNxweme lwePasifiki kwintshona ukuya kwindawo yeentaba zaseSierra Nevada empuma, kwaye isuka kwi-Redwood kunye ne-Douglas fir emahlathi asemantla ukuya kwiNtlango yeMojave kumazantsi mpuma. Intili yeCentral, indawo enkulu yezolimo, ilawula iziko likarhulumente. Nangona iCarlifonia aziwa kakhulu ngemozulu yayo efudumeleyo yeMeditera, ubukhulu beli lizwe buba nemozulu eyahlukeneyo ukusuka kwindawo enemozulu efudumeleyo emantla ukuya kwindawo eyinkqantosi enkqantosini, kunye nentaba yekhephu eneentaba. Ixesha elingaphezulu, imbalela kunye imililo yasendle sele ixhaphakile.Iyintoni ngoku iCarlifonia yaqala yahlanjwa zizizwe ezahlukeneyo zamaNatal aseCalifornian ngaphambi kokuba iphononongwe ngenani lokuphuma kwaseYurophu ngexesha le-16 kunye ne-17. Ubukhosi baseSpain emva koko babanga kwaye babuboyisa. Ngo-1804 yabandakanywa kwiphondo laseAlta California, ngaphakathi kweSpain New Vectoroyalty yaseSpain. Le ndawo yaba yinxalenye yeMexico ngo-1821 emva kwemfazwe eyaphumelela yenkululeko kodwa yagqithelwa e-United States ngo-1848 emva kweMfazwe yaseMexico naseMelika. Inxalenye yasentshona yeAlta California yayilungelelaniswe kwaye yamkelwa njengombuso we-31 nge-9 kaSeptemba, 1850. I-California Gold Rush eqala ngo-1848 yakhokelela kuguquko olukhulu loluntu kunye noluntu, ngokufuduka okukhulu ukusuka empuma nakwamanye amazwe kuqoqosho oluhamba nawo. boom.
Umrhwebi wokuthengisa izindlu okanye umthengisi wezindlu (obizwa ngokuba ngumthengisi wezindlu) ungumntu osebenza njengomthengi phakathi kwabathengisi kunye nabathengi bepropathi yendawo ethengisa izindlu nomhlaba kunye nokuzama ukuthelekisa abathengisi abanqwenela ukuthengisa kunye nabathengi abanqwenela ukuthenga . E-United States, ubudlelwane babusekwe okokuqala ngokubhekisele kumthetho wesiNgesi oqhelekileyo we-arhente, kunye nomrhwebi onobuhlobo bokuthembana nabathengi bakhe. Umthengisi wokuthengisa izindlu nomhlaba ufumana intlawulo ebizwa ngokuba yikhomishini yokudibanisa ngempumelelo indawo yomthengisi kunye nomthengi onokuthi uthengise. Le khomishini inokwahlulwa kunye nabanye abathengisi bezindlu okanye iiarhente ezithatha inxaxheba xa kufanelekile. Umenzeli wezindlu, igama elisetyenziswa e-United Kingdom, ngumntu okanye ishishini elineshishini lakhe lokuthengisa iipropathi endaweni yokuthengisela abathengi. Kukho umahluko obonakalayo phakathi kwezenzo, amagunya, izibophelelo kunye neemfanelo zabarhwebi kunye neearhente zepropathi kwilizwe ngalinye. Amanye amazwe athabatha iindlela ezahlukeneyo zokuthengisa kunye nokuthengisa iipropathi yenyani. EUnited States, nangona kunjalo, abarhwebi bezindlu kunye nabathengisi babo abancedisa abanini ukuthengisa, ukuthengisa, okanye ukurentisa iipropathi zihlala zibizwa ngokuba "kuluhlu lwabarhwebi" kunye "nabameli bokudweliswa."  Uluhlu lwabarhwebi kunye neearhente bafuna ukuthengisa kunye nokuthengisa okanye ukuqeshisa iipropathi ngexabiso eliphezulu elikhoyo phantsi kwemigaqo ebalaseleyo. Abanye abathengisi kunye neearhente banokugxila ekumeleni abathengi okanye abaqashi. Nangona kunjalo, ukunikwa ilayisenisi njengomthengisi okanye umthengisi ugunyazisa umntu onikwe ilayisenisi ukuba abamele amaqela kwelinye icala lolawulo. Ukuzikhethela kweliphi icala ukumela isigqibo seshishini somnini layisenisi.